Avy any Thailand ka hatrany Vietnam ~ Journey-Assist - Avy any Vietnam ka hatrany Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Avy any Thailand ka hatrany Vietnam
Avy any Thailand ka hatrany Vietnam. Avy any Vietnam ka hatrany Thailandy
Ahoana ny fomba hionona any Thailandy ka hatrany Vietnam ary miverina
Tsy sarotra ny miala any Bangkok mankany Vietnam. Ampy izay mba hiditra amin'ny seranam-piaramanidina Suvarnaphumi tapakila handehanana any aminà firenena eksotialy vaovao ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Miverina any Thailandy avy i Vietnam mety ho tratran'ny fiaramanidina na amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Amin'ireo tanàna telo lehibe indrindra any Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh City, Nha Trang) dia mandeha amin'ny zotra maromaro ho an'ny Bangkok isan'andro. Ity no fomba mora vidy kokoa. Manodidina ny 50 $ ny totalin'ny vidin'ny tapakila mandroso.
Nha Trang. i Vietnam
Misy safidy ihany koa raha mandeha voalohany any Thailand ho any Kambodza (bebe kokoa momba izany eto), Ary avy any dia tsy hisy olana intsony eo amin'ny fiara fitaterana mankany Vietnam.
Kompleks Tempolin'i Angkor any Kambodza
Ary koa, mbola misy filokana tsy mitombina mankamin'ny nosy Samui.
Ilay nosy Thailand, Koh Samui dia ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Ny ranon'ny ranomasina dia mampisaraka azy amin'i Vietnam.
Avy any Samui ka hatrany Vietnam dia mety ho tratry ny fitaterana an-tanety. Mbola tsy ahitana mpandeha an-dranomasina intsony. Amin'ity nosy ity dia afaka mividy tapakila bus ianao i Vietnam. Afaka iray andro eo ho eo izao no hitety an’ity firenena ity avy any Samui. Betsaka no tena sarotra ny miaritra ity fomba ity.
Ho Chi Minh City Atsimon'i Vietnam